बाँकेमा पाटेबाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु - Halesi Khabar
बाँकेमा पाटेबाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
२८ भाद्र २०७८, सोमबार १४:१६ ।
बाँके,२८ भदौ । बाँकेमा बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु गएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका- १ गाभरमा भेरी राप्ती स्टाफ होटलमा काम गर्ने करिब ४५ वर्षका व्यक्तिलाई पाटेबाघले खाएको अवस्थामा शव भेटिएको बाँके प्रहरीले जनाएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कोहपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) रवीन्द्र खनालले बाघको आक्रमणमा परेका ती व्यक्ति आइतबार बेलुकीदेखि हराइरहेका थिए । तर, खाेजी गर्नेक्रममा उनको सोमबार बिहान आधा शरीर खाएको अवस्था शव भेटिएको डिएसपी खनालले जानकारी दिए ।
केही समयदेखि सो होटलमा मजदुरी गर्दै आएका मृतकको ठेगाना भने खुल्न सकेको छैन । मधेशी समुदायका ती व्यक्तिलाई स्थानीयले ‘भैया’ भनेर बोलाउने गरेका थिए ।
होटलमा काम सकेपछि बेलुकीपख गर्मी छल्नको लागि उनी सधैं गाउँ नजिकै रहेको राजमार्गको पुलमा गएर बस्ने र अबेर फर्किने गरेका उनी रातीदेखि नै फर्केका थिएनन् । मृतकको शव पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब पाँच सय मिटर उत्तरतर्फ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको जंगलमा भेटिएको डिएसपी खनालले बताए ।
डिएसपी खनालले भने, ‘बाघले मृतकको आधा शरीर खाइसकेको छ । अहिले पनि बाघ शवसँगै छ । बाघको जोडी नै रहेको पाइएको छ ।’ घटनास्थलमा प्रहरी, निकुञ्जको टोली परिचालित भएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) खोटाङ–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको अध्यक्षमा अर्जुनभक्त राई
१. ईश्वर पोखरेलको गोलचक्कर : एमाले कस्तो बनाउने ?
२. बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक : भागवण्डाको जिम्मा शीर्ष नेतालाई
३. गुल्मीमा गोकर्ण विष्टसँग रामकुमारी झाक्रीको चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने
४. काँग्रेस खोटाङको नगर÷गाउँपालिका अधिवेशन : चारमा सर्वसहम, पाँचमा निर्वाचन र एकमा स्थगित
५. हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा एमालेको अधिवेशन आयोजक समिति गठन
६. नेकपा (एकीकृत समाजवादी) खोटाङ–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको अध्यक्षमा अर्जुनभक्त राई